Ronald Koeman Oo Warkii La Sugayay Ka Yidhi Safka Aan Waxbadan Lagu Soo Kordhin Ee Barcelona & Haddii Uu Ku Faraxsan Yahay - Gool24.Net
Ronald Koeman Oo Warkii La Sugayay Ka Yidhi Safka Aan Waxbadan Lagu Soo Kordhin Ee Barcelona & Haddii Uu Ku Faraxsan Yahay
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa markii ugu horreysay tan iyo xidhitaankii suuqa ka hadlay safka aan saxeexyada badan lagu soo darin ee uu Camp Nou ku haysto iyo waliba haddii uu farxad ku dareemayo.
Barcelona ayaa si qaab-darran oo natiijo 8-2 ah ugaga hadhay UEFA Champions League iyagoo bahdilaad culus kala kulmay dhigooda Bayern Munich.
Kaddib natiijadaas waxa wax cad ahaa in loo baahan yahay isku shaandhayn weyn oo safka kooxda ah waxaana la diray xiddigaha kala ah Luis Suarez, Nelson Semedo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal iyo Arthur Melo halka wax yar laga qabtay marka ay noqoto saxeexyada lagu soo kordhinayay.
Da’yarka kooxda ee Ansu Fati ayaa ah mid sii fiicnaanaya marba marka xigta, imaatinka daafaca midig ee Dest ayaa lagu soo daray, Pedri, Philippe Coutinho iyo Francisco Trincao.
Haddaba, Koeman oo hadda u warramay Barca TV ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay safka uu Barcelona ku haysto isagoo sheegay inay tahay inay aqbalaan xaalada dhaqaale ee adag ee kooxda ku habsatay.
“Anigu waan ku faraxsanahay safka aanu haysano, waxaanu samaynay tababaro si aanu meelo cayiman u horumarino, waxaanu ahayn kuwo ku guuleystay meelaha qaar iyo kuwo aan ku guuleysan meelaha qaar” ayuu yidhi Ronald.
“Tani sidoo kale waa qayb kamida xaalada dhaqaale ee kooxda, waa inaanu aqbalno midaas oo aanu barano sidii aanu ugu shaqayn lahayn”
Los Cules ayaa qaab wanaagsan ku bilawday horyaalka iyagoo guulo kasoo gaadhay Villarreal iyo Celta Vigo kahor intii aysan bar-bardhac kala kulmin Sevilla.